Kulan ay yeesheen Baarlamaanka Puntland ayaa looga hadlay arrimaha xuduudaha dowlad… – Hagaag.com
Kulan ay yeesheen Baarlamaanka Puntland ayaa looga hadlay arrimaha xuduudaha dowlad…
Kulan ay maanta yeesheen Baarlamanka dowlad Goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa waxay uga hadleen arrimaha xudduudaha Dowlad Goboleedkaas, gaar ahaan Sool iyo Sanaag. Waxaana sidoo kale fadhigii maanta ay ku go’aaminyeen in ajendayaasha lagu daro la xisaabtanka golaha wasiirrada maamulkaas.
Fadhiga ay yeesheen Golaha wakiillada dowlad Goboleedka Puntland oo ahaa kii 27-aad oo ka tirsan Kalfadhigii 46-aad ee Baarlamanka, waxaa sidoo kale ajendaha dooda lagu daray in dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii Puntalnd ay la gashay hay’adda dekadaha Dubai ee DP World .
Ajandaha la xiriira dib u eegista heshiiska shirkadda DP World, ayaa waxa uu noqon doonaa kulanka berri uu yeelan doono Baarlamanka Puntland.
Dowlad Goboleedka Puntalnd ayaa waxay heshiis dhinaca dekadda Boosaaso horay ula gashay shirkadda DP World, taas oo horay loo amray inay isaga baxdo Soomaaliya, hase-ahaatee shirkaddan ayaa hadda ka shaqeysa Puntland iyo Somaliland.